INkundla yeSibheno yaseAmsterdam: Igolide yaseSkitiya yeyaseUkraine
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » inkcubeko » INkundla yeSibheno yaseAmsterdam: Igolide yaseSkitiya yeyaseUkraine
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • inkcubeko • Education • ukonwatyiswa • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba eziNqabileyo zaseNetherlands • iindaba • abantu • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziUkreqa zaseUkraine
INkundla yaseAmsterdam: Ingqokelela yeGolide yaseSkitiya yeyeUkraine.
NgoDisemba 2016, iNkundla yeSithili saseAmsterdam yakhupha isigwebo sokuba igolide yamaSkitiya ibuyiselwe eUkraine ngokusekelwe kwimithetho yamaDatshi nakwimigaqo yehlabathi. Ngo-Matshi 2017, iimyuziyam zaseCrimea zafaka isibheno malunga nesigqibo.
Inkundla yamaDatshi igweba ukuba ingqokelela yeGolide yaseSkitiya kufuneka inikezelwe eUkraine.
Ingqokelela yeGolide yamaSkitiya yalawula ukuba yinxalenye yelifa lenkcubeko yeLizwe laseUkraine.
Uxanduva lweMyuziyam ye-Allard Pierson yokubuyisela amaqhekeza emyuziyam kwiimyuziyam zaseCrimea iphelile.
Umgwebi ochopheleyo uPauline Hofmeijer-Rutten ubhengeze namhlanje ukuba Inkundla yezibheno eAmsterdam uye walawula ukuba Igolide yaseSkitiya ingqokelela yinxalenye yelifa lenkcubeko ye-Ukrainian State, kwaye kufuneka inikezelwe yi-Allard Pierson Museum kwi-State Museum Fund yase-Ukraine.
"INkundla yeSibheno yaseAmsterdam igwebe ukuba iMyuziyam yaseAllard Pierson kufuneka inikezele 'i-Crimean Treasures' kwi-Ukrainian State," watsho uHofmeijer-Rutten, esongeza ukuba izinto zakudala "ziyinxalenye yelifa lenkcubeko yase-Ukraine" kwaye. "yenxalenye yoluntu yeNgxowa-mali yeMyuziyam yaseUkraine."
Inkundla iphinde yathi iMyuziyam yeAllard Pierson "isinyanzelo sokubuyisela iziqwenga zemyuziyam kwiimyuziyam zaseCrimea ziphelile."
The Igolide yaseSkitiya ingqokelela yezinto ezingaphezulu kwama-2,000 ibijongwe kwiMyuziyam yaseAllard Pierson yeYunivesithi yaseAmsterdam phakathi kukaFebruwari noAgasti 2014. Emva kokufakwa kweRashiya ECrimea ngoMatshi 2014, ukungaqiniseki phezu ingqokelela yavela njengoko zombini Russia kunye Ukraine ibango imiboniso. Ngokuphathelene noku, iYunivesithi yaseAmsterdam yakunqumamisa ukunikezelwa kwengqokelela de ibe imbambano isonjululwe ngokusemthethweni okanye amaqela afikelela kwisivumelwano.
NgoDisemba 2016, iNkundla yeSithili saseAmsterdam yakhupha isigwebo sokuba igolide yamaSkitiya ibuyiselwe eUkraine ngokusekelwe kwimithetho yamaDatshi nakwimigaqo yehlabathi. NgoMatshi 2017, ECrimeaIimyuziyam zenze isibheno ngokuchasene nesigqibo.
NgoMatshi 2019, iNkundla Yezibheno yaseAmsterdam yasikhaba isigqibo senkundla yesithili kodwa yasibeka elinye ixesha isigwebo setyala, icela abachaphazelekayo ukuba bakhuphe amanye amaxwebhu.